mai 2018 · Page 4 de 5 · déliremadagascar
Tokony ho fantarina ny loharanom-bolan’ny kandida hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. « Izay kandida mahazo vato latsaky ny 10 %, tokony ho saziana handoa lamandy 100 tapitrisa Ariary. Continuer la lecture →
Socio-eco	 10 mai 2018 R Nirina
SECES sampana Antananarivo: Hamolavola rafitra hampiombona ny Malagasy
Mikorontana tanteraka ny any andohan’ny vahoaka Malagasy mahita sy maheno ny zava-misy eto Madagasikara. Noho izany, hanatanteraka fivoriana mikato-trano ny alakamisy 16 Mey 2018 ny SECES sampana Antananarivo hamolavola rafitra, lamina mato-paika ary mahomby. Continuer la lecture →
politique	 9 mai 2018 R Nirina
FIKAMBANANA APOKALYPSY ETO MADAGASIKARA: Tsy nampandroso ny firenena ny rà latsaka
Mankasitraka sy mivavaka amin’ny fampihavanana ataon’ny FFKM ho an’ireo mpifanolana ankehitriny ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara ( FAM ). Continuer la lecture →
Ao anatin’ny hetsika “festival mère et enfant” andiany faharoa, ny 28 ka hatramin’ny 30 jona 2018, mikarakara fifaninanana sokajy roa ny Company Mahasoa. Continuer la lecture →
Mivangongo tsy misy mpanangona ny fako eny amin’ny daba fanariana azy eto Antananarivo renivohitra. Continuer la lecture →
Mpanao gazety roa vavy no nandrombaka ny loka tamin’ny fifaninana nokarakarain’ny vondrona eraopeanina. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana momba ny fankalazana ny faha-60 taona niarahan’ny vondrona eraopeanina niasa tamin’i Madagasikara ity fifaninanana natokana ho an’ny mpanao gazety ity. Continuer la lecture →
« Radio N’ambanivolo »: Azo jifaina amin’ny tranokala
Nivoaka tamin’ny faran’ny volana Aprily lasa teo tany ivelany ny raki-kira vaovaon’i Samoela mitondra ny lohateny hoe « Radio N’ambanivolo ». Continuer la lecture →
Tantsaha mpamokatra lavanila sy ny ankohonany, ao amin’ny faritra SAVA, manodidina ny 50.000 hahazo fiantohana ara-pahasalamana maimaim-poana. Continuer la lecture →
Socio-eco	 5 mai 2018 R Nirina
« CLUB EXPORT REUNION » : Andray anjara ny GEM
Ho tanterahana any amin’ny nosy “La Reunion” ny fihaonana iraisam-pirenena ho fampandrosoana maharitra ( Rencontres internationals du développement durable-inscrire nos îles dans un futur désirable) ny 21 Novambra 2018 ka hatramin’ny 23 novambra 2018. Continuer la lecture →
Ny ivon-ketra eny Faravohitra sy eny Alasora no hanaovana andrana voalohany amin’ny fandoavan-ketra amin’ny alalan’ny finday. Continuer la lecture →